January 14, 2021 46
काठमाण्डौ । सामाजिक अभियन्ता भनेर चिनिएकी सर्मिला वाईबाले विनयजंग रिहाब सेन्टरबाट फर्किने पर्खाईमा छिन् । उनले विनयजंगले धेरै कुरा लुकाएका छन् र यतिबेला उनी रिहाबमा भएको हुनाले उनीसंग कुरा गर्न नसकिने अवस्था छ भन्दै विनयजंगको पर्खाईमा आफु रहेको उनले बताएकी छिन् । बेवारिसेहरुको व्यबस्थापन गर्ने क्रममा विनयजंगले धेरै कुराको घोटाला गरेको भन्दै सर्मिलाले शुरुवाती दिनदेखि नै विनयजंगलाई यो कुराको आरोप लगाउँदै आएकी !
नरनाथ गौतम एक अपांग व्यक्ति हुन् । उनै नरनाथलाई सर्मिलाले सबैको अगाडी हा’तपा’त ग’रेकी छन् । हा’त’पा’त ग’र्नुको विषय पनि विनयजंग र सपनासंग जोडिएको रहेछ । सर्मिलाको यो व्यवहारको यतिबेला सामाजिक सञ्जालभरी निकै नै विरोध भई रहेको छ । जति नै रिस उठेपनि र व्यवहार नमिले पनि कसैमाथि हा’त उ’ठा’उनु गलत कुरा हो । तर सर्मिलाले त एउटा अपांगमाथि हा’त उ’ठाए’की छन् । उनको यो व्यवहारको सबैले चौतर्फि विरोध गरेका छन् । बसिरहेको नरनाथलाई बाघले ‘झ’म्टि’ए झैं गरी सर्मिलाले यसरी ‘हा’त’पा’त ग’रेकी
Prev४ ओटा गाडी थियो श्रीमती ड्राइभरसंग गइन्, छोरा फिल्म निर्माता हुन् तर ‘मेरो बुवा होइन’ भन्दै बुढेसकालमा बृद्धाश्रममा राखिदिए, अन्तरवार्ता लिनेले पनि थाम्न सकिनन् आँशु (भिडियो हेर्नुस्)
Next१० लाख अमेरिकी डलर पर्ने परेवा अमेरिकाबाट उडेर अस्ट्रेलिया पुगेपछि हंगामा, सारा अष्ट्रेलियनहरुले नै भने यो परेवालाई बाँच्ने अधिकार छैन
पर्वतमा जीप दुर्घटना,२३ वर्षीया कौशिलाले ज्या’न गुमाइन्
सरकारी गाडीको दु’रुपयोग: गाउँपालिकाको सरकरी गाडी पिकनिकमा लगेर
श्वेता र बिजेन्द्रबिचको यस्तो हर्कत गरेको टिकटक भाइरल (6723)
आफ्नै कार, नेपालगञ्ज र पोखरामा घर, ३३ बर्षकी युवती यति भएपछि केटालाई के चाहिन्थ्यो ! (3793)
बागलुङमा बाघसंग दोस्ती गर्ने दिपेन थापा आए काठमाण्डौ, कारण यस्तो,बाघसंगको दोस्तीबारे यसो भन्छन (भिडियो सहित) (1519)
का’टिएको हात खुट्टामा जोडिदिए पछि… (1259)